Oxytocin သည်ကြွက် subthalamic နျူကလိယ (၂၀၁၂) တွင် dopamine-mediated ဆုလာဘ်ကို modulates - Your Brain On Porn
oxytocin ကြွက် subthalamic နျူကလိယ (2012) တွင် dopamine-mediated ဆုလာဘ် modulates
မှတ်ချက်များ - လေ့လာမှုသည်အောက်တိုတိုစီသည်စွဲလမ်းမှုယန္တရားများကိုမည်သို့တားဆီးနိူင်သည်ကိုပထမ ဦး ဆုံးထုတ်ဖော်ပြသခြင်းဖြစ်သည်။ oxytocin သည်မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းကြောင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကိုလျော့နည်းစေကြောင်းကောင်းစွာတွေ့ရှိရသည်။ ၎င်းသည် oxytocin သည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းကြောင်းနှင့်ကောင်းမွန်သော circuit တွင် dopamine ကိုတက်ကြွစေကြောင်းကောင်းစွာသိရှိထားပါသည်။ ဒီလေ့လာမှုမှာအလွန်သေးငယ်သောဆုလာဘ် circuitry ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာ dopamine နှင့်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေကိုတားစီး oxytocin ရှိပါတယ်
Horm ပြုမူနေ။ 2012 ဒီဇင်ဘာ 10 ။ pii: S0018-506X (12) 00293-0 ။ Doi: 10.1016 / j.yhbeh.2012.12.003 ။ [
Baracz SJ, Cornish အဘိဓါန် JL.
စိတ်ပညာဌာန, Macquarie တက္ကသိုလ်, ဆစ်ဒနီ, သြစတြေးလျ။
အဆိုပါ subthalamic နျူကလိယ (STh) ပို. ပို. မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်များအတွက်လှုံ့ဆျောမှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်အရေးပါသောဒေသအဖြစ်အသိအမှတ်ပြု။ dopamine လျှင်သေးဆုလာဘ်အချက်ပြဘို့အဓိကတာဝနျရှိ neurotransmitter လည်း STh အတွက်ဆုလာဘ်-ဆက်စပ်လှုပ်ရှားမှုဖြန်ဖြေအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ကိုမသိရသည်။ အဆိုပါ neuropeptide oxytocin dopamine နဲ့အဆိုပြုထားအပြန်အလှန်တော်အားဖြင့်, psychostimulant စိတ်ကြွဆေး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချဖို့ STh အတွင်းဆောင်ရွက်သည်။ သို့သော်ဤအပြန်အလှန်၏ယန္တရားများမသိရသေးဖြစ်ကြသည်။ whether- ဆုံးဖြတ်ရန်ရည်ရွယ်ပြီးလက်ရှိလေ့လာမှု
အဆိုပါ STh သို့ microinjected (ဈ) dopamine single-ရုံးတင်စစ်ဆေးအေးစက် session ကိုအောက်ပါသိသိသာသာရာအရပျ preference ကိုဖြစ်ပေါ်လိမ့်မယ်,
(ii) Co-အုပ်ချုပ် dopamine အဲဒီ receptor ရန် dopamine များအတွက် conditional ရာအရပျ preference ကို (CPP က) ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းပိတ်ဆို့မယ်
iii) Co-အုပ်ချုပ် oxytocin dopamine များအတွက် CPP ကတားဆီးမယ်လို့နှင့်
(ဃ) ကိုရွေးချယ် oxytocin ရန် desGly-နယူးဟမ်းရှားရှိမရှိ2, ဃ (CH2)5[D-Tyr2, Thr4] oxytocin နှင့် dopamine နှင့်အတူပူးတွဲအုပ်ချုပ်ခွင့်ရသောအခါ OVT, oxytocin ၏သက်ရောက်မှု reverse နှင့် dopamine များအတွက် CPP ကဖြစ်ပေါ်လိမ့်မယ်။
ရလဒ်များအရ Sprague Dawley ကြွက်များသည် i) dhopamine (၁၀၀ nmol / ဘေးထွက်) အုပ်ချုပ်မှုနှင့် STH သို့ပေါင်းစပ်သည့်အခြေအနေတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ (၃) oxytocin (၀.၆ nmol / ဘေး)၊ dytamine CPP အပေါ် oxytocin အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် oxytocin ရန်ဘက်၏တွဲဖက်အုပ်ချုပ်မှု (100 nmol / ဘေး) ဖြင့်ပြောင်းပြန်။ တီhese အချက်အလက်များကို STh အတွက် dopamine neurotransmission ဒေသခံ oxytocin receptors ၏ activation လျှော့ချနိုင်အကြိုးသက်ရောက်မှုကိုထုတ်လုပ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။